Tsy fisian’ny WhatsApp ny andron’ny 4 Oktôbra, nanosika ny fitomboan’ny fampiasàn’ny olona ireo teknolojiam-pifandraisana fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2021 2:36 GMT
FAMPITANDREMANA: Fanalàna azy ity tantara manaraka ity. Vakio raha sahy!
4 Oktôbra mitatao vovonana, rehefa avy nanagadra ilay voromailala faha-dimampolo mpitondra hafatra lafony tamin'io andro io izy, ary natolony ho an'ilay tompony vaovao avy eo, nakaton'i Juan Pájaro García ny varavaran'ny toeram-pivarotany ary napetany ny soratra hoe MIKATONA. Nandinika ilay fahanginana mahasanganehana izy, sy ny fivandravandran'ny tsy fisiana fofon-taim-borona mahery intsony.
“Efa an-taona marobe aho no tsy nahalafo vorona,” hoy i Pájaro, izay, miaraka amin'i Paloma vadiny, mitantana ny Pájaro Pajarera, toerana iray fivarotana vorona ao an-tanànan'i Meksikô, mivarotra manokana ireo voromailala fanirakiraka. “Ampoka tanteraka aho androany.”
Fotoana tahaka izao ihany, marobe ireo tompona fandraharahàna tany amina toerana samihafa manerana izao tontolo izao no nahamarika fitomboan'ny fanjifàna boaty vifotsy sy tady bà (pelotes) ary tariby. Toy ny tao Banjul, renivohitr'i Gambia, tsy arak'ireo toerana fivarotana zavamaneno tany amin'ireo tanàna ao Afrika Andrefana intsony ny tinady tamin'ny tamas, zavamaneno miendrika sablier fantatry ny Tandrefana tsy mahay loatra azy amin'ny hoe “amponga miresaka.” Ary Ron W, mpankafy radio CB, tampotampoka teo izy dia naharay antso sy fitsidihana avy amin'ireo namany izay tsy niraharaha azy hatrizay an-taona maro.
Ireo mpampiasa aterineto izay nampiditra ny fiteny hoe “Setroka” tao amin'ny Google sy DuckDuckGo koa dia nahita fa ny fehezanteny voalohany avoakan'ny fikarohana dia ny hoe “Ahoana no fomba handefasako setroka fanairana.” Fehezanteny iray hafa malaza navoakan'ny fikarohana ny hoe “Afaka ofaniko hampita hafatra ve ny vorondolo, toy ny tao anaty Harry Potter.”
Ilay fahalinana tampoka tamin'ireo fitaovam-pifandraisana fahiny dia natosiky ny fahatapahan'ny WhatsApp, ilay fampiasa fandefasana hafatra an'ny Facebook, izay nampitsingoangoana ireo marobe mpampiasa azy nanerana izao tontolo izao satria tsy afaka nandefa hafatra teo noho eo ho an'ireo namany ry zareo, ho an'ireo mpiaramiasa, ireo mpikambana ao anatin'ny ankohonany, ireo vondrona misy ny akama fahiny tany amin'ny lisea sy ireo olona tsy niahiahy na inona na inona ary tsy manana hevitra mihitsy momba izay fomba nahatafiditra azy ho ao anatin'ireny vondrona fifampiresahana hafahafa ireny.
“Lava be ny lisitr'ireo lahatsary fako ato amiko sy ireo saripika novaovaina izay mila alefako ANDROANY amin'ireo nenitoa sy beben'ireo olona ,” hoy ny olona iray mpandala ny teorian'ny tsikombakomba, tezitra, niresaka tsy nitonona anarana. “Toriako i Facebook.”
Iray nanambana ny hanenjika eny amin'ny fitsaràna ihany koa i Karen D., izay nosakanan'ilay fahatapahana ka tsy afaka nandefa tao anatin'ny vondron'ireo mponina ao an-tanànany, ny fampilazana momba ny olona iray nampiahiahy teny an'arabe, mitafy ny fanamian'ny sekoliny.
Azia Atsimo 13 ora izay
Antsafa 17 ora izay